ဗိုလ် ချုပ် ပုံ ငွေစက္ကူ ၂၀၀၀ ကျပ်ရှိယုံ နဲ့ တည်းခိုနိုင် မယ့် မန္တလေး က ဟို တယ် – Shwewiki.com
ဗိုလ် ချုပ်ပုံငွေစက္ကူ 1000 တန်တွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့ နောက် ပြည်သူတွေ ဝမ်းသာခဲ့ကြသလို ဘဏ်မှာသွားပြီး လဲလှယ်ယူရင် ပျော်ခဲ့ကြရပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ပုံငွေက္က္ကူတွေ အလကားဝေပေးခဲ့သလို ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ငွေ တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ပါတာနဲ့ တစ်ဝက်ပဲရှင်း ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်
ခု တစ် ခါပြောပြပေးမှာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ ငွေ 2000 ပါတာနဲ့ တည်းခိုနိုင်မယ့် ဟိုတယ် တစ်ခုအကြောင်းပါ. . .ဒီအကြောင်းကို;တေးသံရှင် နန်း အောင်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်က တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. .သူက ခုလို ကြေငြာထားပါတယ်
ကျွန်တော် ဟိုတယ်မှာအခန်းဈေး2သောင်းပါ အခုထွက်တဲ့ချစ်ရသောဗိုလ်ချုပ်ပုံပါငွေနဲ့ဆိုရင် တခန်းကို2ထောင်နဲ့တည်ခိုနိုင်ပါတယ်ဗျာအချိန်30 1 2020ထိပါ စက်မူ့၁စံပြလမ်းပြည်ကြီးတံခွန်မန္တလေးမြို့ 09400012221 ဆိုပြီး လိပ်စာနဲ့ အတူ ဖုန်းနံပါတ်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်
30.1.2020 အထိတဲ့နော်. . .သင့်လက်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ နဲ့ ငွေ 2000 ရှိနေပြီလား ဒါဆိုရင်တော့ အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်ကြီးမှာ တည်းခိုခွင့် ရနေပါပြီ. ..ဟော်တယ်မှာ တည်းတဲ့ အချိန် အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့တော့ ဘာမှ ကြေငြာထားတာမတွေ့ရပါဘူး သွားတည်းမယ်ဆို သေချာမေးပြီးမှ သွားပါနော်
Source : တေးသံရှင် နန်း အောင်
ဗိုလျ ခြုပျပုံငှစေက်ကူ 1000 တနျတှေ ထှကျပျေါလာပွီးတဲ့ နောကျ ပွညျသူတှေ ဝမျးသာခဲ့ကွသလို ဘဏျမှာသှားပွီး လဲလှယျယူရငျ ပြျောခဲ့ကွရပါတယျလှတျတျောအမတျတဈဦးကလညျး ဗိုလျခြုပျပုံငှက်ေက်ကူတှေ အလကားဝပေေးခဲ့သလို ဗိုလျခြုပျပုံ ငှေ တဈထောငျတနျတဈရှကျပါတာနဲ့ တဈဝကျပဲရှငျး ဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျလညျး ပျေါထှကျခဲ့ပါတယျ
ခု တဈ ခါပွောပွပေးမှာကတော့ ဗိုလျခြုပျပုံနဲ့ ငှေ 2000 ပါတာနဲ့ တညျးခိုနိုငျမယျ့ ဟိုတယျ တဈခုအကွောငျးပါ. . .ဒီအကွောငျးကို;တေးသံရှငျ နနျး အောငျဆိုတဲ့ Facebook အကောငျ့ပိုငျရှငျက တငျထားတာဖွဈပါတယျ. .သူက ခုလို ကွငွောထားပါတယျ
ကြှနျတျော ဟိုတယျမှာအခနျးဈေး2သောငျးပါ အခုထှကျတဲ့ခဈြရသောဗိုလျခြုပျပုံပါငှနေဲ့ဆိုရငျ တခနျးကို2ထောငျနဲ့တညျခိုနိုငျပါတယျဗြာအခြိနျ30 1 2020ထိပါ စကျမူ့၁စံပွလမျးပွညျကွီးတံခှနျမန်တလေးမွို့ 09400012221 ဆိုပွီး လိပျစာနဲ့ အတူ ဖုနျးနံပါတျပါထညျ့ပေးထားပါတယျ
30.1.2020 အထိတဲ့နျော. . .သငျ့လကျထဲမှာ ဗိုလျခြုပျပုံ နဲ့ ငှေ 2000 ရှိနပွေီလား ဒါဆိုရငျတော့ အဆငျ့မွငျ့ဟျောတယျကွီးမှာ တညျးခိုခှငျ့ ရနပေါပွီ. ..ဟျောတယျမှာ တညျးတဲ့ အခြိနျ အစားအသောကျနဲ့ ပတျသတျလို့တော့ ဘာမှ ကွငွောထားတာမတှရေ့ပါဘူး သှားတညျးမယျဆို သခြောမေးပွီးမှ သှားပါနျော
Source : တေးသံရှငျ နနျး အောငျ